Suuriya: Qaxa iyo Barakaca dagaallada ka socda dalkaas – Kasmo Newspaper
Updated - April 15, 2018 12:34 pm GMT
London (Kasmo), Xafiiska Qarammada Midoobay u qaabilsan arrimaha aadamiga, OCHA ayaa laga caddeeyay in, laga soo bilaabo 1dii Jenayo 2018, dad lagu qiyaasay 700,000 ka carareen goobihii ay ku noolaayeen, dagaallada dartood.
Isuduwaha Xafiis-goboleedka Hay’addaas, Panos Moumtzis ayaa maalintii Talaadada, 10kii April muujiyay walaaciisa ku aaddan baarakaca joogtada ah ee ka dhashay colaadda.
Ereyada Sarkaalkan ayaa ku beegnaa ka dib markii 9kii April, Maraykanka oo garabsanaya Britain iyo Fransa ku hanjabay tillaabo military oo jawaab u noqon karta weerarkii Kiimikada ahaa ee Douma ee Xukuumadda Suuriya iska fogaysay mas’uuliyaddiisa.
Urur ka shaqeeya gargaarka Caafimaadka ‘SAMS’ (Syrian American Medical Society) ayaa wariyay in habeennimadii 7 iyo 8 April ka dheceen 2 weerar oo Kiimiko ah dadna ku dhinteen aagga bariga Ghouta, in kasta oo caddeymo madaxbannaan aan loo hayn.
Sida ku cad xogta Xafiiska Qarammada Midoobay, in ka badan 400,000 ayaa ku barakacay woqooyiga Suuriya, kuwaas oo isugu jira 300,000 Idlib iyo 137,000 Afrin. Halka 133,000 khasab ku noqotay in ay 4 toddobaad oo qur ah uga baxaan aagga bariga Ghouta, ka hor intii xoogagga Xukuumaddu ayan qabsan 12kii April.
44,000 oo ka mid ah dadka ku soo qaxay Ghouta waxay ku suganyihiin xeryo buuxdhaafay oo loogu talagalay barakacayaasha daafaha Dimishiq. Halka 50,000 oo isugu jira rayid iyo dagaallamayaal loo raray Gobollada Idlib iyo Aleppo, sida uu qabo heshiis dhexmaray xoogagga Xukuumadda iyo fallaagada.
Tiradaasi waxay ku biiraysaa midda 6,5ta malyuun ee Dunida ugu barakacay gudaha dalalkooda ilaa bilowgii dagaallada sokeeye, 15kii March 2011, iyo 5,6ta malyuun ee u qaxay dalalka dariska. Ilaa bilowgii dagaalladaas in ka badan kala bar dadweynihii Suuriya ayaa dalka ka baxay iyaga oo u qaxay dalalka dariska gaar ahaan Urdun iyo Lubnan.